WAAYO DALJIRKA 2017 | JAMHURIYADDA
Home Gudaha WAAYO DALJIRKA 2017
Dalkan dadkii lahaa waa baraarugeen, waa dhallinyarada Soomaaliyeed, wiilal iyo gabdhaba. Waxyaalaha xasuusta nagu reebay sannadka 2017 waxaa ugu weyn masiibadii 14kii Oktoobar ka dhacday Muqdisho, isgoyska Zoobe oo hadda loo bixiyay 14ka Oktoobar.
Ayada oo cid kale aysan abaabulin ayey is adeejiyeen Dal iyo Dibadba. Waa tii la ogaa wacdaraha ay dhigeen oo ay ka mid ahayd u gargaaridda dadkii dhaawaca ahaa iyo ururintii meydadka. Waxay saf u galeen inay dhiig u shubaan dadkii dhaawaca ahaa ee u baahnaa.
Meel walba oo ay ku sugan yihiin “WAA WAREEY” ayey ku qayliyeen, iyagoo adeegsanayey baraha bulshada. Dunida oo dhan waxay gaarsiyeen inta ay la egtahay baaxadda dhibaatadii ka dhalatay qaraxii Zoobe maqal iyo muuqaalba.
Ardaydii joogtay Dalalka la geeyay dadkii dhaawacyada culus qabay waxay isku xilsaareen inay kaltan u galaan Isbitaallada la geeyay si ay u garab istaagaan, ugana saacidaan dhinaca luqada marka ay takhaatiirta la kulmayaan.
Dhallinyarada waa kaydka aan ku ribeyno, cisi iyo sharaf Allaha siiyo, saadaasha waa guul Insha Allah. Ugu dambeyn bal ila dhegeysta heesta ay tiriyeen dhallinyarada Xidigaha Geeska:
Afkaygow qolo ma tihid, qabiil iyo reer ma tihid, qof gaar ku lihi ma jiro ……
Xaliima Sheikh iyo Xusein Xusein
Previous articleCaddaaladda Yaa Ka Mas’uul ah
Next articleJahliga Baahsan iyo Jid-Gooyada Dhaqanka-Siyaasadda